मनमोहनका विद्यार्थी गरे वहुउपयोगी उपकरण र मेसिनहरुको आविष्कार
विराटनगर, भदौ २१ मोरङको मनमोहन स्मृती पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युटमा अध्ययनरत विद्यार्थीहले विभिन्न बहुउपयोगी उपकरण र सामाग्रीहरुको आविस्कार गरेका छन् । सो कलेजमा विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई प्रयोगात्मक रुपमा देखाउन विभिन्न उपकरण तथा उपयोगि सामाग्रीहरुको आविस्कार गरेका हुन् ।
प्रदेश नं. १ कै उत्कृष्ट पा्रविधिक शिक्षालय रहेको मनमोहनमा पोलिटेक्निकमा ३ वर्षे सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स र मेकानिकल विभागमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले प्यारालाईसिस भएका विरामीको हेरचा तथा स्याहा गर्नेदेखि माइक्रो हाइड्रो पावरको नमुना समेत तयार गरेका हुन् । अध्ययन सकेर उतिर्ण भइ जान लागेका विद्यार्थीहरुद्धारा निर्मित ति सामाग्रीहरुको प्रदर्शनी गरिएको छ ।
कलेजको सवै विभागका विद्यार्थीको समुले बनाएका सामाग्रिहरुको कलेज परिसरमै उनिहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका उपकरण तथा सामाग्रीहरुको प्रदेश नं. १ प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापा खड्का, प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मी, मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युटका प्रिन्सिपल डा. सुभाष श्री पोखरेल, सुचना प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, विभिन्न सञ्चारमाध्याममा आवद्ध सञ्चारकर्मीहले अवलोकन गरेका छन् ।
सो कलेजको इलेक्ट्रोनिक्स विभागमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले प्यारालाईसिस भएका विरामीको हेरचाह तथा उनिहरुको सुविधाका लागि उपकरण बनाएका छन् । सो उपकरणले प्यारालाईसिस भएका विरामीको अवस्था, उनिहरुलाई लागेको भोक, तिर्खा तथा शौचालय जानुपर्ने अवस्थाका विषयमा बताउने प्रिन्सिपल डा सुभाष श्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्यसै गरि उनिहरुले ‘डिजिटल वेदर स्टेसन विथ नोटिस बोर्ड’, आधुनिक हाजिरि मेसिन, ‘बायोमेट्रिक डार लक’, मोवाइलकै माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने बम डिस्पोज गर्ने रोबट र ‘स्मार्ट ब्लाइण्ड स्टीक’ बनाएका छन् । ‘स्मार्ट ब्लाइण्ड स्टीक’ ले दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्दा, पानि परेको, खताराको समेत संकेत मात्र गर्दैन त्यसले अगाडी आएको चिज बस्तुहरुका विषयमा समेच सचेत गाराउँछ ।
त्यस्तै इलेक्ट्रिकलका विधार्थी मध्ये ६ जनाको समुहमा रहेका विद्याथीले ‘अर्डिनो बेस फ्यान विण्डिङ मेसिन’, ६ जनाकै अर्को समुहले ‘सिन्च्रोनाइजेसन टु अल्टरनेटर्स’ निर्माण गरेका छन् । सोही विभाग मध्ये ५ जनाको समुहले सोलारबाट चल्ने एसि निर्माण गरेका छन् । जुन व्यवहारिक प्रयोगमा अतिनै उपयोगि छ । यो एसिले सौर्य शक्तिबाट चल्ने बनाइएको छ ।
सोही विभागका ८ जनाको विद्यार्थी समुहले माइक्रो हाइड्रोलिक पावर प्लान्टछ समेत आविस्कार गरेको छ । अर्को ८ जनाका विद्यार्थी समुहले फोहरमैलाबाट विजुली निकाल्ने मेसिनको विकास गरेको छ । त्यसैगरि अर्को ५ जनाको विद्यार्थी समुहले ‘जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रिसिटि फर्म गार्बेज’, र अन्य ६ जनाको विद्यार्थी समुहले ‘अण्डरग्राउण्ड केवल फल्ट डिस्टेन्स लोकेटर’ आविस्का गरेका छन् ।
जसले ‘अण्डर ग्राउण्ड’ गरिएका विद्युत तार विग्रिएको खण्डमा बिना कुनै झण्झट ठ्याक्कै पत्ता लगाउने काम गर्दछ । यो अतिनै उपयोगि हुने मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युटका सुचना प्रमुख एवम् प्रतिष्ठानका सदस्य सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरि मेकानिकलमा अध्यय गरेका ७ जनाको विद्यार्थी समुहले हावाबाट चल्ने साइकल आविस्कार गरेका छन् । सोही विभागका अर्को ६ जनाको विद्यार्थी समुहले ‘पेपर प्लेट मेकिङ मेसिन’ बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को ६ जनाको समुहले ‘हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन’ बनाएको छन् । अर्को ७ जनाको समुहले ‘सोलार अपरेटेड राइडल मेसिन’, त्यसैगरि ६ जनाको समुहले ‘न्युमेटिक पन्चीङ रिभेटिङ मेसिन’ र अन्य ६ जनाको विद्यार्थी समुहले ‘इन्जेक्सन मोल्डीङ मेसिन’ निर्माण गरेको सुचना प्रमुख चौधरीले बताए ।
उनले सवै उपकरणहरु अतिनै उपयोगी रहेको दवी गर । उनले भने,‘वास्तवमै विद्यार्थीले आफुले सिकेको शिप प्रयोग गरेर देखाएका छन् । ति सवै चिजहरु एकदमै उपयोगी छन् ।’ पद्रशनीको अवलोकन गरेपछी प्रदेश नं. १ की सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापा खड्काले विद्यार्थीहरुको आविस्कार उपयोगी रहेकाले उनिहरुको क्षमतालाई प्रोत्साहन गर्न पहल गर्ने बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले प्राविधिक शिक्षामा उत्कृष्ट रहेको सो कलेज विश्व विद्यालय बन्ने चरणमा रहेको बताउँदै चाँडै बनाउन पहल गर्ने बताइन् ।
कलेजले प्रत्येक वर्ष ‘पास आउट’ हुन लागेका विद्यार्थीहरुको ज्ञानलाई व्यवहारिक र प्रयोगात्मक रुपमा गराउन प्रोजेक्ट वर्क गर्न लगाउने गरेको छ । सो ‘प्रोजेक्ट वर्क’ अन्तर्गत विद्यार्थीले आविस्कार गरेका वस्तुहरुको यसरीनै प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन गरिँदै आएको सुचना प्रमुख चौधरीले बताए ।
२०६६ सालबाट अध्यापन सुरु भएका सो कलेजबाट हाल सम्म १ हजार २ सय २७ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । जस मध्ये ८ सय ८६ जना रोजगारिमा रहेका छन् । हाल सो कलेजमा ५ सय ८६ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रिन्सििपल डा. सुभाष श्री पोखरेलले बताए । देशैभरिको प्राविधिक शिक्षालयहरु मध्ये उत्कृष्ट हुँदै आएको सो कलेजलाई नेपाल सरकारले उत्कष्ट भएकोमा पटक पटक पुरस्कृत गरेको छ ।
चितवनमा सुनिए कवि नगरकोटी